Inqaba emhlophe yosuku lweValentine? Nantsi into ekufuneka uyazi - Indlela Yokuphila
Eyona Indlela Yokuphila Ndithathe intombi yam ndaya e-White Castle ngoSuku lweValentine
Intombi yam ibingazange iye eWhite Castle ngaphambili (engakholelekiyo), ke ndacebisa iisilayidi zesonka samasi.ULucien Formichella / uMqwalaseli
Ukugqibela kwam ukuba ne-valentine, yayiklasi yam yonke yebanga lesithathu. Ndichithe iminyaka emininzi ndihlazisa, ndihleka kwaye ndingahoyi iholide yeHallmarkmark, kodwa lo nyaka wahlukile. Ngethuba lokuqala, ndinomntu ophilayo wokwenyani ukuchitha uLwesine ngokungahleliwe ngoFebruwari, kwaye bendisazi ukuba kufuneka ndenze into ekhethekileyo ukuba ndinalo naliphi na ithuba lokumgcina elandelayo.
Ngokwemvelo, ndathatha intombi yam ndaya eWhite Castle ngoSuku lweValentine.
Ukunyaniseka, wazisa le ngcamango kum. Ngenye intsasa, wandibonisa inqaku malunga nendlela iNqaba eNtsundu eyenza ngayo uSuku lweValentine kwaye ndavuya kakhulu. Emva kweXabiso leCrave lezithembiso endizakumsa kwindawo yokutyela yokwenene kamva ngobo busuku, wavuma ukuya.
Rhuma kwiNcwadana yeNdlela yokuBukela yaBabukeli
Ndenze ugcino eWhite Castle (ufunda elo lungelo, ubhukisho eWhite Castle) ngo-4: 30 emva kwemini. ngoFebruwari 14 emva koko wadanisa ejikeleza igumbi kangangemizuzu engama-20 ngendlela ehlazo kakhulu. Ngethuba lokuqala, ndandonwabile nge-V-Day.
Zaqengqeleka iiveki kumoya ovuthuzayo. Ukuba ubomi bebuboniso bhanyabhanya obuboniswa eHallmark, ngekukho imontage yam yokuwela iintsuku kwikhalenda enkulu yodonga ngelixa ndingafuni kuphoswa yinto edlalwa ngasemva.
Ekugqibeleni, lafika ixesha. Ndineentyatyambo zam, endizithengileyo phezolo kwaye ndikhangeleka zimbi kakhulu emva kosuku lonke, isuti yam kunye nenani lamathandabuzo yesibini. Ngaba ayizukuhlekisa ngoluhlobo ndicinga ngalo? Ndingathini ukuba uyandicaphukela? Kwakusebusuku kakhulu ukuba; inqaba yegrisi yayibiza. Yayingumqobo kude. Uphawu olukhulu ngaphandle lubhengeze i-NEW Sloppy Joe Mac kunye ne-Cheese Nibblers kunye ne-Impossible Burger.
Ndingene kule restyu ndaqaphela ukuba ikhona into engahambi kakuhle. Zaziphi imisinga? Iibhaluni? Yayikhangeleka njengeNqaba emhlophe engenanto. Emva koko inenekazi elinebhodi eqhotyoshwayo lacela igama lam laza landibonisa itafile. Bahlule indawo yokutyela baba ngamacandelo amabini ahlukeneyo. Enye yeyabantu abaqhelekileyo, kwaye iqela elincinci leetafile lalilelethu abantu abaneenkcubeko ababekade bengabekisi.
U-maître d ’Beatrice wandibuza ukuba ndifuna into eselwayo na, ndaza ndayalela iSprite. U-Beatrice wayengoyena mntu wayenemincili kwindawo yokutyela iphela, kwaye wayengakwazi ukuyeka ukuxhuzula ngezibonelelo zoSuku lweValentine yeWhite Castle.
Lixabiso elifanelekileyo, kwaye ufumana kanye le nto uyifunayo, utshilo. Ndinqwale intloko ngamandla.
U-Beatrice washukuma kamnandi ejikeleza icandelo le-Valentine, edlala umculo kwifowuni yakhe (isithethi seBluetooth besiphumile), ethatha imifanekiso njengomama ngobusuku be-prom, encokola nabathengi kwaye enika ii-odolo kubasebenzi bakhe abanomdla. Wayeyindebe ye-Cupid ngenetha leenwele, endilifumene linomtsalane.
Ngo-4: 37 emva kwemini, yayindim kunye nesinye isibini. Bebezonwabisile ngegorha, kwaye ndeva ukuba lo mfo wenza iwhiskey kwaye uza kufundisa iklasi yewhisky kunye netshokholethi kamva ngobo busuku.
Ndihleli apho ndiziva ngathi ndisisidenge esunini nesuti yam yokubuna iintyatyambo ndedwa eWhite Castle ngeValentine's Day. Iqhina elalisentanyeni yam laqina kakhulu. Kufike uSprite wam. Yayinombala opinki.
Kulungile, ndiza kubakho ngo-5. Uxolo ndibanjelwe kukugcwala kwabantu, intombi yam yathumela umyalezo. Mhlawumbi uyatsiba idolophu, ndacinga, ndiziva ndinesicaphucaphu.
Kudlule imizuzu elishumi. Kwangena esinye isibini. Babenxibile kwaye benomfoti kunye nabo. UBeatrice waphantse wafa isiqaqa.
Ndivavanye isicwangciso sam sokuba (ukuba) intombi yam ifikile nini. Ndandiye ndime, ndimange, ndimnike iintyatyambo, ndize ndikhuphe isitulo sakhe. Ndijonge ngaphaya ndaqonda ukuba isitulo sibotshelelwe phantsi. Ndandibile.
Ndisondele, uthe ngo-4: 49 ebusuku. Yonke into elungileyo lol, ndiphendule. Mhlawumbi ukwinqwelomoya kwenye indawo, ndacinga njalo.
Abantu abanomfoti bazama uku-oda isiselo. Ndinecoke ngaphandle kweramu, iti engumkhenkce ngaphandle kwexesha elide, utshilo uBeatrice ehleka.
Abathengi abaqhelekileyo bangena kwindawo yokutyela. Abanye babenemincili ngemihombiso. Uninzi lujongeka ludidekile kancinci kwaye lwaphuma. Yitya izilayidi zakho, bantu.
Ngesiquphe, lwavuleka ucango wangena, waphuma umphefumlo encumile. Ndiphakame, ndamanga ndanikela ngeentyatyambo. Sahlala phantsi-isicwangciso esenziwe ngokugqibeleleyo.
Ngendikukhuphele isitulo sakho, kodwa sibotshelelwe phantsi, ndatsho. Uye wahleka. Uncedo lwalulukhulu. UBeatrice ubuyile weza kuthatha iodolo yethu. Ndifumene enye iSprite. Umfazi wam wayalela iCoke. Kubonakala ngathi uthando kunye negrisi zisemoyeni.ULucien Formichella / uMqwalaseli
Sahlala ixeshana samangaliswa zizihombiso. Indwangu yetafile ebomvu. Iibhaluni ezimile okweentliziyo. Ukuhonjiswa kwetafile ebomvu-ndicinga ukuba yayiliphepha elinobunzima kunye nokusasaza okuphuma phezulu. Sifunde imenyu, kwaye ndenza umboniso omkhulu wokumxelela ukuba afumane nantoni na ayifunayo kuba iphezu kwam — isiqhulo esihle.
Omnye umlindisi weza sabeka iiodolo zethu. Intombi yam ibingazange iye eWhite Castle ngaphambili (engakholelekiyo), ke ndacebisa iisilayidi zesonka samasi. Ufumene ezimbini. Ndayalela inkukhu kunye nesilayidi esine-waffle, ebendifuna ukuyizama, kunye nesilayida sokuqala. Sagqiba kwelokuba sahlule ingxowa yamaringi e-anyanisi.
Sayithatha yonke sangena. Itafile esecaleni kwethu yayingaphantsi kweesentimitha ezintandathu kude. Ukuba omnye umntu ebezile, ngesele exinene kakhulu. Ndacacisa ukuba ndenze impazamo enkulu ngokuthenga iintyatyambo ngezolo. Undixelele ukuba uthanda iirosi ezomileyo. U-Beatrice wadada ngokujikeleza ngokungathi wayekhona Ichibi laseSwan . Ingoma kaDiddy Ndiza Kulahleka Uyidlale kwifowuni yakhe, elandelwa yintengiso.
Ukutya kwethu kwafika, kwaye ndambukela njengoko aqala ukuluma. Olu yayiluhambo lwam lobuntombi lwe-valentine lwam oluya eWhite Castle, kwaye kwakubalulekile ukuba uyakuthanda ukutya. Kulungile ngenene. Iqhina lam laziva liqhelekile kwakhona. Wafaka iringi yetswele kwi ketchup ethile wancuma. Ndabuya ndancuma.
Inkukhu yam kunye nesilayidi esine-waffle sasisihle. Ndicinga ukuba bafake isiraphu yemephu ngokuthe ngqo kwi-waffle. Inqanawe yenkukhu yayinzima kancinci, kodwa ngaphakathi yayinencindi kwaye ithambile. Yisandwich eqinileyo kakhulu, kunye nokuzalisa ngakumbi kuninzi lweemveliso zeNqaba eNtshonalanga, kodwa izilayidi zabo zokuqala zisengukumkani. Ndithathe ukuluma kwam.
Yinto yonke pickle, Ndathi kuye.
Ndiyazi, waphendula. Ndiyakuthanda oko.
Amakhonkco anyanisi ayenamafutha ngokugqibeleleyo, ndaza ndavula iSauce yeZess Zing. Imisesane ye-anyanisi emhlophe ityiwa ngcono phambi kokuba ibande kwaye ibenzima. Siphumelele, ubukhulu becala.
Indoda enkulu kwi-40 yayo eneentyatyambo yahlala phantsi ecaleni (ngaphezulu) kwethu. Wayebonakala engonwabanga ukubakho kwaye wayeyedwa ngeentyatyambo zakhe-njengohlobo oluthile lwe-Ghost of Valentine's Day Yet to Come. Kwafika inenekazi lakhe ndaziva ndingcono kancinci, naye ngokunjalo.
Inenekazi elinxibe idyasi ebomvu kunye neiglasi ezibomvu ezibomvu lahlala etafileni ecaleni kwakhe. Wayenomqamelo omile okwe kati, awubeka kwisitulo esichaseneyo ngokuchasa iholide. Ndingabuyela emva kwayo. U-Beatrice wanyusa kuye.
Ndingumntu wekati, latsho eli nenekazi.
Ndingadinga enye yezi, itsho intombi yam, ijonga iphepha elingenanto. Ndamxelela ukuba andenziwanga ngemali (siqhula), saza sa-odola ezinye izilayidi ezimbini zeshizi.
Ndonwabe kakhulu ngoku, uqhubeke.
Ngaba eso sisicatshulwa esithe ngqo? Ndibuzile.
Ewe, ewe, ndicaphule kuloo nto, njakazi.
Esi sesinye sezigqibo ezingcono esizenzileyo, utshilo, ndichukumisa isandla sam. Kwakungumzuzu omnandi, kodwa ndandisazi ukuba kufuneka siqale inkqubo yokuhamba. Ilanga belisiya kutshona ngaphandle, kwaye njengomntu ophinda rhoqo eWhite Castle, bendisazi ukuba ukutshona kwelanga kunokuthetha ingxaki.
Iqela elikhulu labantu, elinebhotile yeVeuve Clicquot kunye nencinci, yahlala emva kwethu. Umntwana waqalisa ukukhala kwangoko. Iqhina lam beliphinde laqina. Iisentimitha ezintandathu phakathi kwethu kunye nenye itafile zivakala ngathi zintathu. Bacele ukuba sithathe umfanekiso. Intombi yam yathatha ifowuni yaza yaxhasa ngefestile.
Ndazama ngokungxama ukufumana itsheki. U-Beatrice ebengekho edanisa ndaweni ithile, laza inenekazi elisizisele ukutya kwethu lavuma ngentloko laza lacimela. Icandelo leValentine lalizalisa; Ndaqala ukuziva ngathi ndijongile kwihotele i-California.
Intombi yam iye kwigumbi lokuhlambela. Ndimbukele elindele ukungena ngaphakathi-akukho zitshixo zokuhlambela e-White Castle, kukho nje isitshixo ekhitshini njengeengcango kwisibhedlele sabagula ngengqondo. Indoda endala enxibe isuti yombane eluhlaza yangena yaza yalinda naye. Bazama isibambo.
Ngokukhawuleza, intombi yam yabuya etafileni. Lo mfo uzichamele nje wandicela ukuba ndimncedise ekucoceni. Ndijonge emva wabe ehamba eyongena ebathroom. Akukho mntu wumbi wayebonakala ephawula. Bendingafuni ukuyichaza kuye, kodwa yinto eqhelekileyo esemgangathweni yeWhite Castle. Ndabhuduzela ndaqala ukujonga ishedyuli yebhasi. Ubize i-Uber.
Kwakufumana i-claustrophobic kakhulu. Khange ndiyifumane itsheki. Umntwana osemva kwam ebekhwaza. Ungamzisa njani umntwana kwindawo yokutyela enjalo? Yinqaba emhlophe ngokulunga. Ngomhla weValentine!
Ekugqibeleni, ityala lafika- $ 18, akukho nto imbi. Ndanika inenekazi i $ 22. Uye wandinika iitshokholethi ezimhlophe ezinentliziyo emhlophe ezimile okweentliziyo. Sabaleka sisindisa ubomi bethu.
Ngaphandle umoya uphinde waziva kamnandi, ndaye ndaphefumla ukukhululeka. Kwakungathi sisandula ukukhupha inkunzi yebhanki ecothayo. Sangena emotweni yokubaleka.
Andifuni kuvakala ngathi lusana, kodwa yayilixesha elimnandi kakhulu, yatsho intombi yam. Ude lo mfo wazichamela phambi kwam. Inqaku elifanelekileyo.
Yiloo nto nge-White Castle-uyazi ukuba ibhombu izakuwela ngelinye ixesha, kodwa ngekhe wazi ukuba nini.
Ndijonge efestileni ndancuma. Andazi ukuba yintoni eqhuba abantu ukuba baye eWhite Castle ngeValentine's Day. Isenokuba luthando lokutya, ukuvutha ngumsindo ngokuchasene nenkqubo, ngexabiso okanye ngaphandle kwentsingiselo. Ndicinga nje ukuba iyakuba yinkumbulo ehlekisayo ukujonga emva.
Ndathatha intombi yam ndaya eWhite Castle ngoSuku lweValentine-kwaye ndaphila ukuze ndibalise intsomi. Yiloo nto nge-White Castle-uyazi ukuba ibhombu izakuwela ngelinye ixesha, kodwa ngekhe wazi ukuba nini.ULucien Formichella / uMqwalaseli
'Iibhulukhwe zangaphantsi zecaptain' sisiQinisekiso esiPhefumlelweyo kunye nesokuBhukuqa soPhiliso oluPhilayo
Ukurhola umbane ukutshaja iiCable Falls ngokuhambelana nembali yeApple yeeNgcaciso
Lo Mthetho uYilwayo weeGates oQeqeshiweyo oFumene ukuFumana indlela elula yokuCima ukukhutshwa kweGreenhouse ngama-20%
ukuthandana sites abantu abatshatileyo
bukela iingxoxo ze-gop zihlala kwi-intanethi
zeziphi ezinye iiapps ezilungileyo zokuthandana
uyasweleka uJackie ekupheleni komongikazi uJackie
rampage yokugqibela ukubaleka kwe-gary tison 2017
online ukuthandana singles abadala